के अमेरिकाले नेपाललाई आधा करोड डोज खोप दिन लागेको हो ? [ तथ्यसहित ] – UPDATE LINK
के अमेरिकाले नेपाललाई आधा करोड डोज खोप दिन लागेको हो ? [ तथ्यसहित ]
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र लेखेको विवाद चलिरहेको थियो ।अचानक सोही प्रशंगमा अर्को बहस नेपालमा सुरु भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको पत्रपछि अमेरिकाले नेपाललाई कोरोना खोप छिट्टै उपलब्ध गराउने खालका कुराहरु बाहिर आए ।
तर विश्वको शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले कुनै एक देश बिशेष भन्दा पनि सिंगो क्षेत्रलाई नै ध्यानमा राखेर काम गर्ने गरेको छ ।यो बीचमा नेपालसँगै भएका भारत, पाकिस्तानसहित देशहरु पनि कोरोनाबाट अत्याधिक प्रभावित भइरहँदा नेपाललाई किन खास रुपमा लियो भन्ने प्रश्न धेरैको मन नउठेको होईन ।
नयाँ विवाद तब उत्पन्न भयो जब राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले सामाजिक सञ्जालट्वीटरमार्फत एक गलत र भ्रमपूर्ण जानकारी साझा गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई आधा करोड डोज कोरोना खोप दिनेछ ।
उहाँले खोप सम्बन्धी गरेको पहिलो ट्वीट, ‘सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको अग्रसरता र नेपाल सरकारको क्रियाशीलताले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिमा आज अर्को सफलता प्राप्त भएको छ ।
हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पचास लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । लङ्ग लाइभ ह्यासट्याग नेपालयूएसरिलेशन ।’
त्यो सँगै उहाँको अर्को ट्वीट पनि थियो, ‘नेपाल लगायत एसियाली देशलाई प्राप्त हुने यो खोपको परिमाणले नागरिकको जीवन बचाउन ठूलो सहयोग गर्नेछ ।’
राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञले यस्तो ट्वीट गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख डोज खोप दिने भन्ने खालका शीर्षकमा समाचार बन्न थाले । सामाजिक सञ्जालमा पनि नेकपा एमाले समर्थकहरुले सरकारको तारिफ गर्दै सो कुरालाई बताउन थालेका छन् ।
तर के अमेरिकाले राष्ट्रपति भण्डारीको पत्रका आधारमा नेपालका लागि छुट्टै भनेर खोप पठाउन लागेको हो ? यसको सही उत्तर हो होईन । अमेरिकाले नेपाललाई विशेष मानेर ५० लाख डोज खोप पठाइरहेको छैन । आखिर सत्य के हो त आउँनुहोस् त्यसबारे जानकारी लिउँः
हालै बाइडेन–हैरिस प्रशासनले विश्वव्यापी खोप बाँडफाँडको रणनीति तयार गर्यो । त्यस रणनीति अन्र्तर्गत अमेरिकाले विश्वका केही देशहरुलाई २ करोड ५० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । अमेरिकाले नेपालसहित अन्य दर्जनौ देशहरुलाई कोभ्यास अन्र्तर्गत खोप वितरण गर्न लागेको हो । अमेरिकाले दिन लागेको १ करोड ९० लाख कोभ्याक्स प्राप्त गर्ने देशहरुमा नेपाल पनि परेको छ ।
दक्षिण र मध्य अमेरिकाका निम्न देशहरूमा ६० लाख डोज खोप पठाउँदैछ । ति देशहरुमा ब्राजील, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वेडर, पराग्वे, बोलिभिया, ग्वाटेमाला, एल साल्भाडोर, होन्डुरस, पनामा, हाइटी, र अन्य क्यारिबियन देशहरू, साथै डोमिनिकन रिपब्लिक पनि यसभित्र परेको छ । अमेरिकाले थप ७० लाख खोप उपलब्ध गराउन लागेका देशहरुमा भने नेपाल पनि परेको छ ।
अमेरिकाले एसियाली देशहरुका लागि करीव ७० खोप छ्ट्याएको छ । भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदिभ्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाईल्यान्ड, लाओस, पापुआ न्यू गुयना, ताइवान र प्रशान्त टापुहरुका लागि सो खोप उपलब्ध हुन्छ । यसबाट नेपालले कति पाउँछ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
तर जम्मा ७० लाख डोजमा त्यति ठूलो मुलुक र अहिलेसम्मकै धेरै प्रभावित भारत सहित १६ भाग लगाउँदा कति आउला ? अनुमान भने लगाउन सकिन्छ ।
अफ्रिकी देशहरुका लागि ५० लाख डोज खोप छुट्याएको अमेरिकाले ६० लाख डोज मेक्सिको, क्यानाडा, दक्षिण कोरिया, प्यालेसटाइन र गाजा, युक्रेन, कोसोभो, हाइटी, जर्जिया, इजिप्ट, जोर्डन, भारत, इराक, र यमनलगायत संयुक्त राष्ट्र संघको अग्रपंक्ति कामदारहरूको लागि छुट्याएको जानकारी दिएको छ ।
यसरी आफु गलत रहेछु भन्ने लागेपछि राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञले पुरानो ट्वीट हटाउँदै नयाँ गर्नुभयो । नयाँमा पनि उहाँले आफु गलत भएको कुरा स्वीकार गर्न मान्नुभएन् । गल्ती सच्याउँदै उहाँले गरेको ट्वीट यस्तो छ, ‘मैले उल्लेख गरेको परिमाणलाई म तत्काल सच्याउन चाहन्छु ।
यो परिमाण हाम्रो अपेक्षा र अनुरोध हो ।’ उक्त ट्वीटमा प्रतिकृया दिदैँ दिनेश लेख्नुहुन्छ, ‘गल्ति भएछ भन्दा तपाईको केहि जादैनथ्यो । झन् सम्मान बढ्थ्यो । अझै पनि मैले सहि नै भन्न खोजेको हो तर लेख्दा बिग्रिएछ भनेर झुट बोलिरहनु भएको छ ।’ FACT SHEET: Biden-Harris Administration Unveils Strategy for Global Vaccine Sharing, Announcing Allocation Plan for the First 25 Million Doses to be Shared Globally